Teknolojia · Jona, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Jona, 2009
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Jona, 2009
Tontolo Arabo: Fa inona no andrasan'i Arabo?
Alzeria 05 Jona 2009
Mpitoraka blaogy roa avy amin'ny lafin-tany arabo roa samihafa no mikamenona amin'ny zavatra iainan'ireo arabo, manomboka any amin'ny Ranomasimbe ka hatrany amin'ny Gôlfa . Ny iray manontany hoe mandra-pahoviana isika no hipetraka ho mpitazana fotsiny foana raha ny firenen-kafa kosa miezaka mampanaraka ny teotr'andro sy mampivoatra ny tahirim-pitaovam-piadiana eo am-pelatanany ...
Siria: Manomboka ny fanentanana hanao ankivy ireo orinasan-tserasera ary fangatahana sarany mirary
Fanoherana 02 Jona 2009
Sary nindramina tamin'i donknuth Ao anatina tontolo iray efa tena misandrahaka be, mbola taraiky any aoriana any foana i Siria; nialoha kely ny taona 2000 dia niseho vahoaka ny aterineto ary ny taham-pitsofohana amin'izao fotoana dia manodidina ny 17%. Na izany aza anefa, ny maro amin'ireo mpampiasa ny aterineto dia...